Munamato kuMweya Wega Kuita Kuti Munhu Auye [+]?
Munamato kumweya wega kuti uite kuti munhu auye Inogona kuve iyo chombo chakavanzika icho chinotibatsira mune idzo nguva dzisina mumwe anogona kuzviita.
Munguva idzodzo dzatinoshuvira pamwe nemweya yedu yese kuti timuone iyeye munhu asi isu hatizive kana kuti toita sei zvekuti ndiye iye anozvisarudzira kuti auye kuzotiona, uyu ndiwo munamato unogona kutibatsira isu panguva iyoyo.
1 Munamato kumweya wega kuti uite munhu auye Chii chiri kune?
1.1 Munamato kumweya wega kuti uite kuti munhu auye
3 Munamato uyu une simba here?
Munamato kumweya wega kuti uite munhu auye Chii chiri kune?
Izvo zvinoshanda zvakanyanya kuita munhu iyeye Huya usangane nesu sekumuita kuti ataure nesu.
Iko kudikanwa kunogadzirwa mumunhu iyeye kuti atione kuri kukura kudzamara achiuya kuzotishanyira hakugoneki.
Chishandiso chine simba icho chatinogona kushandisa nekutenda chero nguva yatiri kuda, zvisinei nekuti ndeyese mazuva ese.
Anima Sola, mutsvene wangu akaropafadzwa, ndinokukumbira nekutenda kukuru kuti uite munhu uyu ...
(izere zita remunhu)
Ndakadzokera mumaoko angu, kuti kubva nhasi ndirikunzwa kuti takabatanidzwa nezvisungo zverudo, ndinokuteterera, simba rako guru kudzoka uine moyo wakashama kwandiri uye kuti hapana chinokuendesa kure nerutivi rwangu, kuti iwe ramba uchindida mukati medu, muviri uye mweya. , kubva zvino kusvika narinhi.
Ini ndinokukumbirisa mumunamato uyu kumweya wega kuti uite kuti munhu auye, Anima Alone, ndikwererewo rubatsiro rwako.
Ndinokukumbira, nokutenda kwangu kose, Anima Oga, kuti uite, pamwe neechipo chako chishamiso, kuti munhu wandinoda zvikuru anodzokera kudivi rangu, nemoyo uzere nerudo uye nzwisiso, nekuda kweizvozvo.
Shingairira wega, ndinokutsaurira munyengetero uyu, wakabva kwandiri, ndinokukumbira, usandikanganwa, kuti ndinogara ndiri mupfungwa dzako.
Uye ndinokuvimbisa kuti kana munhu uyu achinge adzoka,, Ndichakuitira zvinotevera iwe, _ndatenda
Rangarira kuti hapana zvakananga nharaunda, zuva kana mamiriro ekuita munamato uyu.
Izvo zvinogona kuitwa chero nguva kana nzvimbo.
Kana iwe uchida kubatidza kenduru kana kuita zvishoma pamhepo usati wanamata, zvakanaka, asi izvozvo hazviite kuti munamato ushaye kana kusimba.
Special yekuita mune zviitiko paine anoshaya kana akabiwa nhengo yemhuri uye anoshanda kune dzimwe mhuka.
Simba uye kushanda kwemunamato uyu zvinoshamisa kunyangwe zvakaoma sei chishamiso.
Tinofanira kunyengetera mazuva ese. Tinofanira kuva nekutenda muminamato uye titende.
Kana tisina kutenda hatizotarisirwa.
Iwe unofunga zvichamhanya zvakanaka. Kuti mumwe munhu ari kuzokunzwa iwe uye abatsire muchikumbiro chako.
Ingonamata chete kamwe pazuva, uine kutenda uye nesimba. Munguva pfupi iyo yako ichave inowanikwa uye uchave unofara.
Kana iwe uchida, vhenekera kenduru chena kana kenduru tsvuku yekutenda.
Makenduru anoshanda kune kupa kune izvo masangano anotibatsira mukuraira kwedu.
Icho chinhu chiri nyore, asi chinoshanda kwazvo.
Nyika Zvemweya ndezvechokwadi zvatakatenderedzwa nazvo uye nenyaya yekuti isu hatidi kuitora zvakakomba hazvireve kuti haipo, ndosaka kugadzira izvo zvekushandisa zvemweya zvedu zviri kuwedzera simba.
ari minamato yakagadzirwa kubva kumweya inouya iine simba rakakosha nekuti hapana chakaita sekuvimbika kana uchitaura nemunhu wemweya.
Ndoimwe kutonga kunozadziswa neminamato yose inoitwa muhupenyu, chero angave ani, vanofanirwa kuitwa nguva dzose nekutenda nekuti ndicho chinhu choga chinodiwa icho chinoita kuti munamato uwane mhinduro.
Namata munamato kumweya wega kuti uite kuti munhu auye nekutenda. Zvese zvichave zvakanaka.